Rise endorsements — njem Lee - Official Site
"Njem e dere ede a akwụkwọ na m na-eche ọ bụla na-eto eto kwesịrị ịgụ. Ya ahuhu n'ihi na Jizọs na ọgbọ a na-abịa site lewe gị anya na bụla na peeji nke. M ike na-eche ịhụ mmetụta a na ozi nwere on a ọgbọ nke ahụ bụ agụụ na-agụ maka nzube. "
- Lecrae, Grammy awarding- emeri artist @lecrae
"Bilie bụ a phenomenal akwụkwọ na captures obi anyị omenala. Ozugbo m welitere ya apụghị m idoru ya ala. Njem ịma aka ndị ị na-REAL, na-egosi gị otú ị na-ebi ndụ gị ka bụ nwa agbọghọ dị n'ụwa taa. Great-agụ. "
- Sam m, NFL linebacker, akwalite ọdịmma ndị mmadụ @thesamacho
"Njem onye deworo akwụkwọ m chọrọ ka m ga na-agụ mgbe m dị obere. ya ahuhu, amamihe, na ọchịchọ na-aka na-eto eto bụ a Agba ọrụ Chineke na-eme site na Njem na-arụ ọrụ o nwere ike ime site n'ọnụ anyị niile. "
- Kirk Franklin, Grammy award- emeri na multi-platinum ndekọ omenka @kirkfranklin
"M hụrụ n'anya na-agụ Rise. Ọtụtụ ugboro n'akwụkwọ a, m chọpụtara na m medi- tating n'elu peeji nke mgbe m na-agụ ha. A gbara m ume, n'ike mmụọ nsọ, na aka n'ụzọ nile site. The omenala chọrọ ka anyị na imefusị oge ma Chineke chọrọ ka anyị jiri oge anyị na n'ihi mmetụta n'agbanyeghị afọ ole anyị. Nke a bụ ihe ịtụnanya na-agụ nke ndị chọrọ iji oge ha eme ihe n'ụzọ amamihe na-eme ka a dị iche n'ihi Alaeze ahụ. "
- Justin amuma, NFL na-agba ọsọ azụ @JForsett
"Ya mere, mgbe anyị na-ekwurịta chọrọ eme ka a dị, ma anyị adịghị n'ezie ga-esi na-eme ihe ọ bụla. My enyi, njem Lee, onye deworo akwụkwọ nke ga-amụnye ọkụ n'okpuru a ọgbọ nke ahụ na-akụziri na-n'ụzọ dị mfe. Ọ na-aka anyị ka anyị 'bilie' ma na-ebi akụkọ na Chineke kere anyị. Amaara m na m na-aga ịtụ aro akwụkwọ a ka onye ọ bụla m maara. "
Ị nwere ike ịzụta Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili, n'ebe ọ bụla akwụkwọ na-ere. Chọpụta ihe na Risebook.tv
kelvin masiala kalaluka • January 26, 2015 na 2:42 pm • zaghachi
Innocent • January 26, 2015 na 2:42 pm • zaghachi
WIZEMAN • January 28, 2015 na 4:11 Abụ • zaghachi
Kemi iDREAM • January 28, 2015 na 11:47 Abụ • zaghachi
Phil • February 3, 2015 na 1:01 Abụ • zaghachi
Tireo • July 17, 2015 na 11:01 Abụ • zaghachi